Reema Bishwokarma or Reema BK (रिमा बिक)
Topic: Reema Bishwokarma or Reema BK (रिमा बिक)
Author Topic: Reema Bishwokarma or Reema BK (रिमा बिक) (Read 30356 times)
Re: Reema Bishwokarma or Reema BK (रिमा बिक)
« Reply #10 on: December 13, 2017, 12:50:10 AM »
nisha-reema.jpeg (744.76 kB, 768x768 - viewed 499 times.)
« Reply #11 on: December 14, 2017, 11:10:15 AM »
Quote from: anand on December 12, 2017, 12:48:16 PM
बैवाहिक सम्बन्ध बिच्छेद भएको केही दिन नबित्दै नायिका रिमा विश्वकर्मा सुटिङ सेटमा भेटिइन् । हितैषी नायिका केकी अधिकारीले निर्माण गरेको फिल्म ‘कोललपुर एक्सप्रेस’ मा रिमा अतिथि कलाकारको भूमिकामा छिन् ।
विशाल भण्डारीले निर्देशन गरि रहेको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा रिमाको भागमा एउटा गीत परेको छ । यही मंगलबार राती रिमा उत्तर बाहिनी मन्दिरमा मुस्कान सहित नृत्य गरिरहेकी थिइन् । मुहार जसरी के रिमाको मन पनि मुस्कुराएको थियो त ?
‘मन र मुहारको तालमेल नमिल्दा पनि काहिलकाही काम गर्नु पर्ने रैछ’, रिमाले भनिन्, ‘मुहार त मुस्कुराउँदै नै राम्रो देखिन्छ । मनमा त को नै पस्न सक्छ र ?’ उसो त रिमाको मन बुझाउने केकी पनि प्रयासरत छिन् ।
« Reply #12 on: December 14, 2017, 11:51:31 AM »
« Reply #13 on: June 09, 2018, 10:20:07 AM »
« Reply #14 on: July 13, 2018, 09:30:37 AM »
डिभोर्सपछि नेपाल फर्किएर मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय हुने प्रयासमा रहेकी नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्मा अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुबै सक्रिय छिन् । प्रायः विदेश भ्रमणमा गइरहने उनले विशेष गरी इन्टाग्राममा आफ्ना सेक्सिला तस्विर सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् । जहाँ उनको लुक्स र फिगरबारे उनका साथी–सर्कल र प्रशंसकबाट तालतालका कमेन्ट आउने गर्छन् ।
नेपाली मूलका बेलायती नागरिक रोबर्ट विश्वकर्मासँगको वैवाहिक यात्रा टुंग्याएकी उनले यसै साता न्युयोर्कको सडकमा उभिएको तीन पोजको तस्बिर राखिन् । सेक्सी लुक्समा देखिएकी उनका तीनै तस्बिर खुब रुचाइए । त्यसमा पनि कुम बेन्ड गर्दै अगाडि झुकाएर खिचेको तस्बिरले त धेरैको ध्यान नै तान्यो । सोही तस्बिरमा उनकी बेस्ट फ्रेन्ड नायिका वेनिशा हमालले आगोको लप्काको साइनसहित लेखिन्, ‘सेउसी !’
उनका प्रशंसकमध्ये कसैले मोटी देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए त कसैले राम्री देखिएको भने । प्रशंसक मध्येका एक रमेश खड्काले लेखेका छन्, ‘योर बुब्स आर अमेजिङ !’ अनावश्यक कमेन्ट हटाउन सकिने सुविधा भए पनि उनले प्रतिक्रिया त्यत्तिकै छाडेकी छन् । सायद प्रतिक्रियाप्रति उनको कुनै विमति छैन क्यारे !
reema bishwakarma.jpg (1639.82 kB, 1080x1350 - viewed 503 times.)
« Reply #15 on: April 03, 2020, 03:51:02 PM »
रिमा विश्वकर्मा डिभोर्स पश्चात भन्छिन् :
एक्लै भएपनि आफु पूर्ण छु क्यानाडानेपाल डेस्क
बिहीबार माघ २, २०७६
काठमाडौ । नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्माको नयाँ म्युजिक भिडियो 'बधाई छ' अहिले चर्चा बटुलिरहेको छ । भिडियोमा रिमाले डिभोर्स भएपश्चातको जीवन निभाएको भूमिकामा देखिएकी छिन । यो भिडियोमा देखाइएको कथा रिमाको जीवनमा समेत मेल खाने कुरा उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा उल्लेख गरेकी छिन् ।
पवन गिरिको स्वरमा रहेको 'बधाई छ' गितको भिडियोमा रिमालाइ मुख्य मोडलको रुपमा देख्न सकिन्छ । रिमा विश्वकर्माका अनुसार डिभोर्स पश्चातको जीवनको चित्रण यस भिडियोमा गरेकाले गर्दा दर्शकहरुले मलाई रिलेट गर्नुभयो । रिमाले आफुलाई समेत यो रोल अभिनय गर्न सहज भएको बताएकी छिन् । आफुले उक्त पिडा भोगेका कारण यस रोलमा अभिनय गर्न सहज भएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
रिमाले भनिन्, "डिभोर्स पश्चात पनि जीवन बेकार हुन्छ भन्नु सोच्नु गलत हो र यहि कुराहरु यो भिडियोमा समेत देखाउन खोजेको छ । मैले पनि डिभोर्सको पिडा भोगेको कारण यो भिडियोमा अभिनय गर्न मलाई सहज भएको थियो । कत्ति कुराहरु मैले आफ्नो जीवनको भोगाईसंग रिलेट गरेको छु र दर्शकहरुले समेत रिलेट गर्नुभएकोले पनि होला यो भिडियोलाई मन पराईदिनु भएको छ । डिभोर्स हुनु भनेको दुई जना एकै भएर जीवनको गोरेटोमा हिड्न नसक्नु हो र यहि मेरो जीवनमा समेत भएको थियो । मैले एक्लैले गरेर बन्धन जोडिने होईन र डिभोर्स हुनु भनेको नै जीवनको अन्त्य समेत होईन । म एक्लै पनि पूर्ण छु ।"
रिमा विश्वकर्माको जीवनमा डिभोर्स पश्चात झन् बढि सफलता आर्जन गरेको देखिएको छ । डिभोर्स पश्चात उनि मिडियामा बढि सक्रिय रहेकी छिन् । नेपाल आईडलको होष्टको रुपमा रिमाले लोकप्रियता हासिल गरिन् जुन उनले नायिका भएर गर्न सकेकी थीइनन । अझै पनि रिमालाई नायिका भन्दा मोडल र नेपाल आईडलको होष्ट भनेर दर्शकले बढि चिन्ने गर्छन । अहिले रिमा नेपालको पहिलो कमेडी रियालिटी शो "कमेडी च्याम्पियन' निर्माण तथा होष्ट गरिरहेकी छिन् ।
Lokaantar_No-0005.jpg (48.74 kB, 789x356 - viewed 291 times.)
reema-benisha_edXnrN3zLL.jpg (28 kB, 800x535 - viewed 418 times.)
Rima_b-5a48bac7284340.98827886.jpg (32.54 kB, 750x526 - viewed 394 times.)
reemabishwokarmathumb2020-01-16-12-48-47.png (957.41 kB, 1100x677 - viewed 302 times.)
« Reply #16 on: April 03, 2020, 03:54:38 PM »
maxresdefault(5).jpg (114.18 kB, 1280x720 - viewed 294 times.)
« Reply #17 on: April 27, 2020, 08:45:23 AM »
Never ever admired her. Kina kina irritate garne keti justo lagcha.
« Reply #18 on: April 29, 2020, 08:03:49 PM »
i appreciate and admire her for refusing to accept award given to her on the basis of caste.
« Reply #19 on: May 12, 2020, 08:43:03 AM »